Ifenisha yomkhiqizo, ukuqinisekisa ikhwalithi
Umbhede wosofa, usofa, izihlalo, usofa ohlukanisiwe, omatilasi nombhede wohlaka olwesimanje, IYurophu, Isitayela seChesterfield
Ngaphezulu 35 iminyaka yokwethembeka kwe-ODM ne-OEM
I-Baotian Samani Co, Ltd. yasungulwa phakathi 1985 futhi itholakala eShunde, Foshan idolobha, Isifundazwe saseGuangdong. Simboza indawo ye 50,000 amamitha skwele nenhloko-dolobha ebhalisiwe mayelana 2 isigidi se-USD.
Umkhiqizi wemibhede yosofa waseBaotian ubekhethekile ekukhiqizeni usofa, umbhede wesofa, i-recliner kagesi, umatilasi nohlaka lombhede. Siyabambisana neprojekthi yamahhotela, wholesale, nabathengisi.
U ulinganisa i-backrest ene-foam ephezulu kakhulu ekwenza uzizwe uthambile nokusekelwa futhi. Indwangu emnyama ye-velvet emnyama kungaba lula ukuyihlanza. Idizayini ye-armrests ehlelekile kufanele ifane namatafula okudlela okuphakama ahlukile. Isisekelo sesihlalo esiqinile sokhuni esenza impilo yesevisi ibe yinde futhi ihlanganiswe.
Isitayela sesiNgisi u-L owakhiwe ngendwangu usofa egumbini lokuphumula usofa oyingxenye yobukhosi. Amagilebhisi ansomi, zothando nenhle, umdlalo ophelele nenjabulo yokunambitha utshani bewayini lamagilebhisi. Ama-headrests angaguquguqukayo avumela ukufunwa kwakho, zisuse noma uzibambe noma kunini lapho udinga khona. Uhlaka lwensimbi engagqwali kanye nentwasahlobo ephaketheni esihlalweni sezihlalo ziletha ukuphepha nokuthokozisa ukuhlala kwezihlalo ndawonye.
Usofa waseChesterfield onesihlalo ilula futhi ithambile kunabanye, ethatha usofa ojwayelekile waseChesterfield. Sisebenzisa ukwakheka kwakudala kepha sikunikeze umuzwa wesimanjemanje. Ngokususelwa ohlotsheni lokuxhuma lukaChesterfield, sizama ukushintsha ukuma kwaso kwendabuko okusindayo.
Isofa lounge losofa wanamuhla elinombala onsomi onsomi - ngokuvilapha okuyimfihlakalo kodwa okuhle ngobuhle. Izinyawo eziqinile zokhuni ziveza kakhulu ukusekelwa okunamandla. Umuzwa onethezekile uthola indlela yokuhlala kusofa onjalo usebenzisa intwasahlobo efakwa ephaketheni & isiponji esiphakeme kakhulu.
Ngokuthuthuka kukamatilasi, kuvela umatilasi omusha osanda kuhlungwa, okuhamba njengenketho kulabo abanethemba lokuba nobumnini bememori bobabili kanye nomatilasi basekuqaleni. Ngokuyinhloko umatilasi oyi-hybrid ungumgogodla ongaphakathi entanjeni olayishwe ngogwebu oluphezulu kakhulu. I-Hybrid iyisinqumo esihle kubantu abafuna ukujabulela inhlanganisela yokuxhaswa kwentwasahlobo kepha baphikelela ngekhwalithi yegwebu lememori.
Umbhede omnyama wokugcina isikhumba kuhle ukukhethelwa ikamelo lokulala elincane ngoba lizohlala likhulisa ngokubukeka futhi lengeza ukukhanya kwezinkanuko. Lona omnyama uhlanganisa ubukhazikhazi nesitayela nebhodi le-quilting eliqinile kanye nakho konke okufihla amabhokisi okugcina.
Umbhede kaChesterfield Design Black Fabric Corner, Isimanje, Hlanza, neMfashini. Ingxenye eyodwa enkulu yesikhwama sesihlalo sekhoyili ikhululekile futhi ithambile. Idizayini ehambayo kulula ukuyihlanza futhi iqoqeke. Izinkinobho zensimbi yegolide nemilenze yensimbi engagqwali yenza umklamo wosofa ube nenhle ngokwengeziwe.
3 indwangu yokulala umbhede wosofa, ngeBelgium Brand Mechanism Umbhede Wozimele. Uhlaka lwensimbi olunamapayipi oluqinile, ngomatilasi ephaketheni entwasahlobo: 143*195*12cm. Isinyathelo esisodwa sokuvula umbhede wosofa sisebenziseka kalula futhi kulula ukusiphatha.
Ifenisha yehhotela isitayela sesimanje ukusetshenziswa okuguqukayo kwesihlalo samakhushini umbhede wosofa Umbhede wosofa usebenzisa phezulu 500 Umkhiqizo waseMelika. Isikwele se-piping chungechunge sinikeza ukusekelwa okuqinile ukuhlangabezana nezidingo zamahhotela ahlukile nemindeni. Usayizi womatilasi basentwasahlobo ojwayelekile: 90/130*185*12cm.
Usofa wasekhoneni wesimanje uya ngokuya ethandwa ngenxa yosayizi wawo ongaguquguquka namakhona athokomele abawanamathisele. Uma ufuna okuthile okushaya ibhalansi elungile phakathi kwechaise nosofa wasekhoneni, cabanga ngefenisha yethu yaseBaotian. Leli sofa elikhulukazi linendawo eyanele yawo wonke umndeni ngaphandle kokuzikhukhumeza. Izindwangu ezimpunga zengeza ukuthinta okwengeziwe kokunethezeka kumklamo. Kunokuningi okuningi okutholakala njenge-velvet uma ungayithandi indwangu ngakho-ke yiba nesitolo ezungeze ...
Isofa le-Navy Blue Corner
Uma kukhulunywa ngosofa, inketho engapheli izokwenziwa engqondweni yakho ngokususelwa kusayizi wabo, isitayela, impahla, ubuciko, nabanye. Kunezitayela eziningi kunokuba ungacabanga zibhekene nezinhlobo eziningi. Noma kunjalo, Izinto ezintathu eziyisisekelo ezinquma isitayela sosofa. Lokhu kufaka phakathi izingalo, emuva, nemilenze kasofa, kungakhathalekile ukuthi ngabe yisofa lasekhoneni eliluhlaza okwesibhakabhaka navy. Ngaphandle ngemuva, izingalo, isiketi, isihlalo, njll, izincazelo eziningi zinikezwa ukuthi zisetshenziswe mayelana nosofa velvet oluhlaza okwesibhakabhaka .....